Slewing Drive Factory - China Slewing Drive ထုတ်လုပ်သူများ၊ တင်သွင်းသူများ
စတော့ရှယ်ယာ ဂဟေဆော်ခြင်း Positioner စက် SE12 Slewing drive ကိုရောင်းရန်ရေပန်းစားသည်။
slewing drive မော်ဒယ်များအားလုံးအတွက် SE3~SE25 မှ အမြန်ပို့ဆောင်မှုဖြင့် စတော့ရှိပါသည်။
Spot sale!!! 2021 Hot China slew drive SE7 ကို အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချပါသည်။
Wanda Slewing Bearing Co.,Ltd.ဆိပ်ကမ်းစက်ပစ္စည်းများ၊ မိုင်းတွင်းစက်ပစ္စည်းများ၊ ဂဟေဆက်စက်များ၊ ဆောက်လုပ်ရေးယာဉ်များ၊ မော်ဂျူလာယာဉ်များ၊ တစ်ခုတည်းသောဝင်ရိုး သို့မဟုတ် နှစ်ထပ်ဆိုလာခြေရာခံစနစ်များတွင် အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည့် slewing bearing/slewing ring/slew စက်ဝိုင်းနှင့် slewing drives/slew drive ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူနှင့် တင်ပို့သူဖြစ်သည်။ လေအားလျှပ်စစ်စနစ် စသည်တို့နှင့် အသေးစား၊
စတော့ခ် အရွယ်အစား သေးငယ်သော Slewing drive
1. သေးငယ်သောအရွယ်အစား Slewing drive ကိုစတော့ရှယ်ယာတွင်ရှိသည်။
2. ပေါ့ပါးသော Slewing drive
3. တိကျသော Slewing drive ကို bearing နှင့်အတူ
XZWD Stock Slewing drive worm gear drive ကို အချိန်တိုအတွင်း ပေးပို့ခြင်း။
Xuzhou Wanda Slewing Ring Co., Ltd.၊ သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ slewing bearings နှင့် slewing drives များ၏ ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူအဖြစ်၊ ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်ရေး၊ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် အရောင်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။
၎င်းတွင် ခိုင်မာသော နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ခွန်အား၊ ခိုင်မာသော ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့် ပြီးပြည့်စုံသော စမ်းသပ်ကိရိယာများ ပါရှိသည်။
စျေးကွက်နှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိစေရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံနှစ်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို ပေါင်းထည့်ထားပါသည်။လက်ရှိတွင်၊ rotary drive မော်ဒယ်များအားလုံးသည် stock ရှိပြီးဖြစ်နိုင်သည်။
1.Slewing drive ကို အခြေခံအားဖြင့် single worm drive slewing drive၊ double worm drive slewing drive နှင့် အထူး slewing drive ဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။
2.Slewing drive သည် တပ်ဆင်ရန်၊ ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် နေရာချွေတာရန် လွယ်ကူသည်။
3.Slewing drive သည် ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။
XZWD Precision Solar ခြေရာခံခြင်း Slewing drive SE5
1. အလုံပိတ်အိမ်ရာ slewing drive တိကျမှုအဆင့် IP65။
2. Slewing drive သည် မတူညီသော မော်တာများ (AC၊ DC၊ Hydraulic) ကို ယှဉ်နိုင်သည်
3. ကျွန်ုပ်တို့တွင် SE စီးရီး၊ WEA စီးရီး၊ Single worm နှင့် Dual worm ရှိသည်။
1. အလုံပိတ်အိမ်ရာ slewing drive သည် ဖုန်ဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ မိုးဒဏ်ခံခြင်းနှင့် သံချေးတက်ခြင်းဆိုင်ရာ အခါသမယအတွက် မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်အတွက် အတော်လေးမြင့်မားသောအခြေအနေတွင် အဓိကအားဖြင့် သက်ရောက်ပါသည်။
2. Slewing drive Presion အဆင့် IP65
3. Slewing drive ကို ဆိပ်ကမ်းစက်ပစ္စည်းများ၊ သတ္တုတွင်းစက်ပစ္စည်းများ၊ ဂဟေဆော်စက်များ၊ နေရောင်ခြည်သုံး ခြေရာခံခြင်း အစရှိသည်တို့အတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။
4. Slewing drive တွင် SE နှင့် WEA စီးရီးများရှိသည်။
5. ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များအတွက် မော်ဒယ်အသစ်များကို အပြောင်းအလဲ သို့မဟုတ် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။